ပါတီသုံးခု တပြိုင်ထဲဝင်ထားတဲ့ ဒလန်မ နေအိမ်ကို PDF က ဝင်စစ်လိုက်သောအခါ. . . – စွယ်စုံသုတ
ပါတီသုံးခု တပြိုင်ထဲဝင်ထားတဲ့ ဒလန်မ နေအိမ်ကို PDF က ဝင်စစ်လိုက်သောအခါ. . .
ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊မြောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကြံခိုင်ရေးပါတီ ဝင်ကဒ်၊အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဝင်ကဒ်နှင့် PPPသုံးလုံးပါတီဝင်ကဒ် သုံးခုကိုင်ဆောင်ထားသည့် ဒလန်ဟုဆိုသူအိမ်ကို ဇန်နဝါရီလ ၁၄ရက်နေ့က မြောင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များက သွားရောက်သတိပေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း မြောင်အမျိုးသမီးပြောက်ကျားစစ်သည်တော် တပ်ဖွဲ့ထံက သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ဆွဲလွဲအိုကျေးရွာရှိအကြမ်း ဖက်စစ်တပ်ကို ထောက်ခံသောမိသားစုတစ်စုရှိနေပြီး စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးခြင်း၊ဒေသခံတော်လှန်ရေးသမားများ၏နေအိမ်များကိုလိုက်လံပြသခြင်း၊ပြည်သူများ ၏နေအိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများပြုလုပ်ရန် သတင်းပေးမှုများရှိသည့်အတွက်မြောင်ရှိတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကသွားရောက်သတိပေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စကစကိုသတင်းပေးမှုတွေလုပ်နေတဲ့ မိသားစုတစ်စုကိုသွားရောက်သတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ကိုတစ်မိသားစုလုံးသတင်းပေးနေတာ။အောက်တိုဘာလထဲကတော့သူတိူ့တွေက မရှိကြတော့ဘူး။ရံဖန်ရံခါပဲပြန်လာကြတယ် ဟု မြောင်အမျိုးသမီးပြောက်ကျားစစ်သည်တော်အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူက ဧရာဝတီတိုင်းမ်ကိုပြောသည်။
အဆိုပါဒလန်အိမ်သို့ကာကွယ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကသွားရောက်ရာတွင်ဒလန်မိသားစုမရှိသဖြင့် နေအိမ်အ တွင်းသို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာ အေးမိစံဟူသောအမျိုး သမီး၏ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် NLDပါတီဝင်ကဒ်နှစ်ခု၊PPPပါတီလက်ကမ်းစာစောင်များနှင့်စစ်ဆေးတက္ကသိုလ်ဆင်းအရာရှိတစ်ဦး၏ဓာတ်ပုံများတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
စစ်ကောင်စီ အားပေးအားမြှောက်ပြုနေသော မည်သည့် နယ်ပယ်က လူမျိုးမဆို တားမြစ်တာတွေ အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ အလားတူပဲ စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်အဖြစ်ရှိနေတဲ့ ထုတ်ကုန် မှန်သမျှ ကို သပိတ်မှောက်ခြင်းတွေ ဆောင်ရွက်နေကြသလို ဖြိုချသင့်တာတွေလဲ ဖြိုချခြင်းတွေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်။” ဟု မြောင်မှတော်လှန်ရေးသမားတစ်ဦးကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကျူးလွန်ပြီးနောက် ပြည်သူလူထုမှဆင်နွှဲလျက်ရှိနေသော တော် လှန်ရေးအဆင့်ဆင့်တွင် သတင်းပေးဒလန်များကြောင့် ထိခိူက်ပျက်စီးမှုများရှိသည့်အတွက် ယခုကဲ့သောသတိပေးမှုများရှင်းလင်းမှုများကိုပြုလုပ်နေရခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါဒလန်ဟုဆိုသူအိမ်ကိုသွားရောက်သတိပေးခြင်းကို မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (CDSOM)၊Myaung Union Army၊Myaung Women Warriors ၊မြင်းမူလျှပ်စီးပြောက်ကျားအဖွဲ့ နှင့် နှလုံးလှလူမိူက်ကြီးများအဖွဲ့က သွားရောက်သတိပေးခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားသတင်းပေးဒလန်များကိုလည်း ဆက်လက်သတိပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တော်လှန်အဖွဲ့များကပြောသည်။
#မြောင် #MWW #ဒလန်နေအိမ် #သတိပေး